नयाँ भवन खोज्दै अस्ट्रेलियाको भ्यागुते अस्पताल
२०७३ फाल्गुण २३ सोमबार, सिड्नी । अठार वर्ष पहिला स्थापना भइ स्थापनाकाल देखिनै भ्यागुताको उपचारमा निरन्तर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको अस्ट्रेलियाको एक मात्र भ्यागुते अस्पतालःद कायन्र्स फ्रग हस्पिटललाई मौजूदा भवनबाट सर्नका लागि धौधौ परेको छ । द कायन्र्स फ्रग हस्पिटल, आफ्नो अलग्गै पहिचान बोकेको विश्वभरीकै एक मात्र भ्यागुते अस्पताल पनि हो भनी परिचत छ । बिरालोले छाउरा सारे झैँ स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पाँच पटक विभिन्न स्थानमा सर्दै आइसकेको यस अस्पताल वर्तमान भवनमा स ... बाँकी अंश»
बाबुराम भट्टराईले आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय परिषद सदस्यलाई ट्विटरमा ब्लक गरे !
२०७३ फाल्गुण १७ मंगलबार, काठमाडौं। पुर्व प्रधानमन्त्रि तथा नायँ शक्ती संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नायँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा एक नंबर प्रदेश सम्पर्क संयन्त्र संयोजक देव लिम्बुलाई सामाजिक संजाल ट्विटरमा ब्लक गरेका छन्। लिम्बुले ट्विट गर्दै यसो भनेका छन् - 'म संलग्न नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले मलाई पनि ट्विटरमा ब्लक गर्नुभएछ । धन्यवाद भन्नू बाहेक म सँग अरु शब्द छैन बाबुरामजी ।' भट्टराईले सराकरले स्थानीय तह निर्वाचनको घो ... बाँकी अंश»
स्त्री भक्त रावणको नजरमा महिलाका ७ अवगुण
२०७३ फाल्गुण १३ शुक्रबार, काठमाडौं । मान्छेलाई कसैको गुण कसैको अवगुण लाग्न सक्छ । मनपरेको मान्छेको गुण मननपरेको मान्छेको लागि अवगुण हुनसक्छ । तर, जुनसुकै महिलादेखे पनि आकर्षित भईहाल्ने रावणले भने आफ्नी प्रिय स्त्री वा श्रीमती मन्दोदरीको आधारमा महिलाहरुको विशेषतः ८ अवगुणहरुको बारेमा बताएको कुरा राम चरित्र मानसनामक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । जव सीताहरण गरिसकेपछि वानर सेनाहरु श्रीरामको नेतृत्वमा लंका गएका थिए । सो समयमा समुद्र पार गरी वानर सेना सहित आएका श्रीरामस ... बाँकी अंश»
पति विदेशमा, घरमा पत्नीको रहस्यमय मृत्यु
२०७३ फाल्गुण १० मंगलबार, गौशाला । महोत्तरी जिल्लाको सम्सी गाविसमा एक महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सम्सी गाविस–१ बस्ने शेष इस्तियाकी पत्नी २५ वर्षीया नसरीन खातुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । पति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडीमुलुकमा रहँदै आएका र नसरीन आफ्ना दुई ससाना छोरासहित आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा सोमबार राति उनको शव उनकै कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पोखरेलले बताए । स् ... बाँकी अंश»
विश्वका १० अति महंगा शहरहरु
२०७३ फाल्गुण ८ आइतबार, काठमाडौं। विश्वका अति मह‌ंगा शहरहरुको पछिल्लो सूची सार्वजनिक भएको छ। २०१७ मा प्रकाशित १३ ‌औ वार्षिक डेमोग्राफिया इन्टरनेशनल हाउजिङ एफोर्डाबिलिटिया सर्भेको नाममा गरिएको अध्ययनले मह‌ंगा शहरहरुको पछिल्लो सूची सार्वजनिक गरेको हो। विभिन्न नौ मुलुकका कूल ४ सय ६ महानगरहरुमा गरिएको अध्ययनमा सबैभन्दा मह‌गो शहरको रुपमा चीनको हङकङ पहिलो नम्बरमा परेको छ। ... बाँकी अंश»
कृषि सडक सञ्चालित
२०७३ फाल्गुण १ आइतबार, बाजुरा । बडिमालिका नगरपालिका–९ मा निर्मित सिराडी– माउलेख– जिल्ली पाँच किमी कृषि सडक शनिबारदेखि सञ्चालन भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले सडक उद्घाटन गरे । जिविसको अनुदान सहयोगमा उपभोक्ता समितिको अगुवाइमा सिराडी माउलेख जिल्ली कृषि सडक निर्माण निर्माण भएको समितिका अध्यक्ष मदनराज पण्डितले बताए । सिराडी– माउलेख– जिल्ली कृषि सडक बनेपछि शनिबार से१ज ३१० र से१ज ९१९ नंका दुई ग ... बाँकी अंश»
के विपद् भयो त्यस्तोः सत्र वर्षीया युवती मृत फेला
२०७३ माघ २७ बिहिबार, खोटाङ । जिल्लाको दक्षिणी गाविस लिच्किराम्चे–८ की १७ वर्षीया रीता तामाङ मृत फेला परेकी छन् । मङ्गलबार रातिदेखि हराएकी रीताको खोजी गर्ने क्रममा सिम्पानी–७ स्थित जङ्गलमा बुधबार दिउँसो मृत फेला परेकी हुन् । सिम्पानी बजारको एक होटलमा काम गर्दै आएकी रीता बेलुकी आफ्नो घर नफर्किएपछि खोजी गर्दा मृत अवस्थामा भेटिएको आफन्तले बताएका छन् । सिम्पानीस्थित शिव खड्काको होटलमा काम गर्दै आएकी रीता बिहान काम गर्न होटल जाने र बेलुकी आफ्नो घर फर्क ... बाँकी अंश»
रानीपोखरीको माटो परीक्षण गरिने, चार सय वर्षपछि सरसफाइ
२०७३ माघ २५ मंगलबार, काठमाडौँ । रानीपोखरीको माटो परीक्षण गरिएपछि मात्र सफा गर्ने काम सुरु गरिने भएको छ । रानीपोखरीको पुनःनिर्माणको जिम्मा पाएको वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजी जेभीका निर्देशक अर्जुन कँडेलका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गर्नेछ । पोखरीमा रहेको माटाले पानी कत्तिको सोस्छ भन्ने जाँच गर्न विभागले यसै साता माटो परीक्षण गर्न लागेको छ । गत पुसको पहिलो सातामा नै पोखरीमा रहेका सबै माछा अन्यत्र सारी पोखरी सफा गर्ने तयारी भए पनि माटो पर ... बाँकी अंश»
जलवायु परिवर्तनको असरः बेमौसममा गुराँस फुल्दा वनभरि राताम्मे
२०७३ माघ १९ बुधबार, जाजरकोट । उच्च पहाडी जङ्गलमा गुराँस फुल्ने मुख्य मौसम फागुनदेखि चैत र वैशाख हो, तर यहाँ माघ पहिलो साता नै पहाड राताम्मे हुन पुगेका छन् । जिल्लाकै उच्च भाग बारेकोट क्षेत्रमा पुस पहिलो सातादेखि नै गुराँस फुल्न थालेको थियो । माघ लाग्दासम्म सदरमुकाम नजिकैको पाँचकाटिया क्षेत्र पनि गुराँसले ढाकेपछि हेर्ने र तस्बिर खिचाउनेको भीड लागेको छ । प्रायः फागुन पहिलो सातासम्म बढी चिसो रहने क्षेत्रमा मौसम पनि तातेको छ । “जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ १९ बुधबार, बाजुरा । कोल्टीमा बेवारिसे अवस्थामा एक शिशुको शव फेला परेको छ । कोल्टी– १ थिपिचौरस्थित माझ कुलोको नहरमा शव भेटिएको प्रहरीले बताएको छ । शव मंगलबार बिहान नुहाउन गएका स्थानीयले देखेपछि प्रहरीको रोहबरमा कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याइएको थियो । कोल्टी विमानस्थल सुरक्षा गार्डका प्रहरी निरीक्षक डम्बरबहादुर थापाले कसैले अवैध यौन सम्बन्धपछि जन्मिएको शिशु मारेर फालेको हुनसक्ने बताउँदै अनुसन्धान भइरहेको बताए । शव प ... बाँकी अंश»
मापसेको दुर्गुण, अत्यधिक मापसे गरी साथीको हत्या
२०७३ माघ १७ सोमबार, पाँचथर । अत्याधिक मादक पदार्थ सेवनका कारण पाँचथरको प्राङबुङ–८ मा एक व्यक्तिले आफ्नै साथीको हत्या गरेका छन् । मृत्यु हुनेमा मेमेङ–५ का १९ वर्षीय अजय राई रहेका छन् । आइतबार बेलुका प्राङबुङ–८ मा रहेको स्थानीय हाट बजार भर्न आएका उनीहरु अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरेपछि दुवैबीच झगडा हुँदा उनका साथी सुरेन मगरले अजयको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सो झगडामा गम्भीर घाइते भएका मगरको प्रहरीको निगरानीमा जिल्ला ... बाँकी अंश»
प्रहरी–वकिल सम्मेलनः छब्बीस बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न
२०७३ माघ १७ सोमबार, काठमाडौँ । नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । यही माघ १४ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलनको समापनका अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै अपराध अनुसन्धानमा पनि जटिलता थपिएको हुँदा रोकथामका लागि प्रयास हुनुपर्ने बताए । उनले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलको क्षमता विकास र ... बाँकी अंश»
पानीसंग सरोकार राख्ने १५ जनाको टोलीले नेपाल, भारत र बङ्लादेशमा जलको अवस्था बुझ्ने
२०७३ माघ १६ आइतबार, नवलपरासी । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशमा जलको वास्तविक अवस्था बुझ्न भ्रमण टोली जाने भएको छ । तीनै देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने टोलीले तीनै देशमा जलको वास्तविक अवस्था, जल अधिकारको अवस्था, एक देशले अर्को देशलाई गर्न सक्ने जलसम्बन्धी सहयोगबारे छलफल गर्नेछन् । आगामी फागुुुुन ५ गतेदेखि नेपालबाट जाने भ्रमण टोलीमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेश पाँच, पाँच गरी तीनै देशका पानीसँग सम्बन्धित १५ सरोकारवालाको सहभागिता हुनेछ । करिब १५ दिनसम्म तीनै देशमा ... बाँकी अंश»
कही नभएको जात्रा हाँडी गाँउमा : चामल चोरीको आरोपमा मुसालाई दिइयो सजाय
२०७३ माघ १५ शनिबार, एजेन्सी । तपाईले चोरीको आरोपमा मानिसलाई सजाय दिएको सुन्नु भएकै होला तर के कहिले मुसालाई चोरीको आरोपमा सजाय दिएको सुन्नु भएको छ ? तर यस्तो घटना चीनमा भएको छ । चीनको एउटा चामल स्टोरमा मुसाले चामल खाएको देखियो र त्यसलाई सोहि समय समातियो । त्यति मात्र नभएर त्यसलाई बाधेर पब्लिकको अगाडि बेइज्जत गरियो साथै उसका अन्य सन्तानले भविष्यमा कुनै यस्तो काम नगर्ने चेतावनी समेत दिइयो । त्यस मुसालाई ट्रकको पछाडि बाधेर उसको शरिरमा एउटा कागज टासियो जसमा ... बाँकी अंश»
बाजागाजासहित अर्नाको भव्य स्वागत
२०७३ माघ १५ शनिबार, रत्ननगर । वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले चितवनका लागि कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट ल्याइएको अर्ना संरक्षण र पर्यटन विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने विस्वास व्यक्त गरेका छन् । चितवनको रत्ननगर स्थित सौराहामा अर्नालाई स्वागत गर्न आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चितवनको एउटा परिवारको अङ्गका रुपमा अर्ना ल्याएकोसमेत उल्लेख गरे । यसको संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुनसमेत उनले आग् ... बाँकी अंश»
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनाले काम गरेन अब पुराण लगाइने
२०७३ माघ १४ शुक्रबार, इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न श्रीमद्भागवत पुराणको आयोजना गर्न लागिएको छ । दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र मानिने पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मधेसा गाविसमा पर्ने भोटेपुल आसपास सडक किनारमा माघ १६ गते आइतबार श्रीमद्भागवत पुराणको आयोजना गर्न लागिएको हो । नमुना भजनकीर्तन समूह इनरुवा–३ सुनसरीको आयोजनामा सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने मृतजनको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै पितृहरुको उद्धार र सवारी दुर्घटना न् ... बाँकी अंश»
विदेशी अनुसन्धानकर्ता भन्छन् ‘नेपालको अलैँची र अदुवा स्वादिलो’
२०७३ माघ १२ बुधबार, बनियानी । अलैँची र अदुवामा सोध गरिरहेका विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ता र प्राध्यापकले नेपालको अलैँची तथा अदुवा अब्बल रहेको बताएका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्लाको अलैँची र अदुवा खेतीको अध्ययन–अवलोकन तथा किसानसँग छलफल गरेर झापा फर्किएको टोलीले बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । स्विट्जरल्यान्डको बेन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हान्स पिटर न्वयले नेपालको अलैँची निकै स्वादिलो र सुगन्धित रहेको बताए । नेपाल ... बाँकी अंश»
बेतनामा लोप हुन लागेका तीन सय भन्दा बढी प्रजातिका कछुवा
२०७३ माघ ११ मंगलबार, पथरी । लोप हुन लागेका विभिन्न जातका कछुवालाई बेतना सिमसार क्षेत्रमा राख्न थालिएको छ । मोरङको बेलबारीमा रहेको बेतना सिमसार क्षेत्रले कछुवा संरक्षण अभियान सुरु गरेको हो । सिमसार संरक्षण समितिका सदस्य भोजराज बस्नेतका अनुसार स्थानीय प्रजातिलाई संरक्षण गर्नका साथै लोप हुन लागेका विभिन्न जातका कछुवालाई सिमसार क्षेत्रमा राख्न थालिएको छ । तालमा राखिएको मोटरबोटमा बोटिङ गर्ने र होटलको समेत राम्रो व्यवस्था भएकाले कछुवा हेर्न आउनेको सङ्ख्य ... बाँकी अंश»
आफ्नै व्यवहारको कारणले पतिले छाड्न सक्छन् तपार्इंलार्इ, ध्यान दिनुस् यस्ता व्यवहारमा
२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । पतिपत्निको सम्बन्ध कहिले झगडा त कहिले मिलनमा नै वित्ने गरेको छ । समयसमयमा झगडा पर्नु पतिपत्निको बीचमा समस्याको कुरा त होईन । तर त्यही समस्यालाई तपाईले धेरै बेवास्ता गर्नुभयो भने चाहिँ स्थिती भयावह बन्न सक्छ । तपाई आफ्नो पतिसँग कहिलेकाहिँ कडा व्यवहार गर्नुभयो भने उ स्वभाविक रुपमा डराउने गर्दछ । अर्थात् पतिले गल्ती गरेको समयमा मात्रै तपाईले पतिलाई खबरदारी गर्न सक्नुुहुन्छ । तर, दिन दिनै विविध विषयमा बढी कचकच गरिरहनु भयो भने पनि याद गर्नु ... बाँकी अंश»
संसारका १० खतरनाक सडक, जहाँ पुगेका कमै चालक घर फर्कन्छन्
२०७३ माघ ९ आइतबार, एजेन्सी । यदि तपाई तिब्र गतिमा गाडि हुइकाउने गर्नुहुन्छ भने तपाई कुनै पनि समय दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुनेछ । त्यसैले सडकमा तिब्र होइन सुरक्षित यात्रालाई प्रथमिकता दिइनुपर्ने हुन्छ । संसार भरमा यस्ता सडकहरु पनि छन् जहां तिब्र गतिमा गाडि कुदाउन असम्भव हुन्छन् । साथै यी सडकमा ध्यान दिएर गाडि नचलाए चालक घर फर्कने छैनन् । ... बाँकी अंश»